काठमाण्डौका नगरपालिकाहरुमा कस्को कति अग्रता ? – Sajha Post
काठमाण्डौका नगरपालिकाहरुमा कस्को कति अग्रता ?
साझापोस्ट	३१ वैशाख २०७९ १०:१८
३१ बैशाख, काठमाण्डौ । काठमाडौंका १० नगरपालिका मध्ये ७ वटामा मतगणना शुरू भएको छ । प्रारम्भिक मतगणनामा कांग्रेसले धेरै ठाउँमा अग्रता लिएको छ । शुरू भएकामध्ये ४ नगरपालिकामा कांग्रेस, ३ नगरपालिकामा एमाले र १ नगरपालिकामा राप्रपाले अग्रता लिएका छन् ।
किर्तिपुरमा नेपाली कांग्रेसका राजकुमार नकर्मी ४२७ मतसहित अग्रस्थानमा छन् । एमालेका केशवरत्न बज्राचार्यले २ सय ८० मत प्राप्त गरेका छन् । कागेश्वरी मनोहरामा कांग्रेसका उपेन्द्र कार्की १५३ मतसहित अग्रस्थानमा छन् भने एमालेका रामशरण ढुंगाना १४१ मतसहित दोस्रो स्थानमा छन् ।
गोकर्णेश्वरमा एमालेका उद्धव विष्ट ७५२ मतसहित अग्रस्थानमा छन् । नेपाली कांग्रेसका दिलिप रिसालले ६८३ मत प्राप्त गरेका छन् । टोखा नगरपालिकामा एमालेका प्रकाश अधिकारी ९९ मतसहित अग्रस्थानमा छन् भने कांग्रेसकी रजनी थापाले ६५ र माओवादीका शेखर श्रेष्ठले १३ मत पाएका छन् ।
तारकेश्वर नगरपालिकामा नेपाली कांग्रेसका कृष्णहरि महर्जन २६५ मतसहित पहिलो र एमालेका रामेश्वर बोहरा १५० मतसहित दोस्रो स्थानमा छन् । बूढानीलकण्ठमा एमालेका मीठाराम अधिकारी ७७८ मतसहित अग्रस्थानमा छन् भने नेपाली कांग्रेसका विनोद चालिसे ४२८ मतसहित दोस्रो स्थानमा छन् ।
शंखरापुरमा राप्रपाका रमेश नापित १७५ मतसहित अगाडि छन् भने १७१ मतसहित कांग्रेसका कृष्णलाल बजगाईं दोस्रो स्थानमा छन् ।
चन्द्रागिरीमा नेपाली कांग्रेसका घनश्याम गिरीले १८२ र एमालेका उत्तम राउतले ५१५ मत प्राप्त गरेका छन् ।